Mucaaradka Libiya oo beeniyay in Ciidamada Col Qadaafi ay uga taag roonaadeen Zawiya. – SBC
Mucaaradka Libiya oo beeniyay in Ciidamada Col Qadaafi ay uga taag roonaadeen Zawiya.
Dagaalo xoogan oo maalmihii aynu soo dhaafnay ka socday Magaalada Zawiya oo 50km u jirta caasimada Liibiya ee Triboli ayaa waxaa sheegtay gacan ku haynteeda xiligan dowlada Liibiya,iyadoona Kooxaha Kacdoonka Libiya ay beeniyeen in Ciidamada Korneel Qadaafi ay uga taag roonaadeen Magaaladaasi.
Afhayeen u hadlay Xukuumada Liibiya oo lagu magacaabo Muusaa Ibraahiim ayaa shir jaraa id oo uu qabtay waxaa uu ku sheegay in ay Iyagu haatan gacanta ku hayaan Zawiya,iyadoona kooxaha kacdoonka sida uu sheegay ay gadaal u riixeen.
Dagaaladii ugu dambeeyay ee ku dhex maray Ciidamada Korneel Qadaafi iyo kuwa kacdoonka Magaalada Zawiya,waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof oo ka tirsan dhinacyadii dagaalamayay.
Sarkaal ka tirsan Kooxaha kacdoonka oo la hadlay wakaalada Wararka Reuters ayaa sheegay in aanay jirin guusha ay sheeganayaan Ciidamada Korneel Qadaafi,waxaana uu sheegay dhinacooda in ay yihiin kuwa haatan guusha haysta,ayna wakhti kasta gudaha u gali karaan Zawiya.
Ciidamada isbahaysiga Nato waxaa ay dhinacooda sheegeen in ay kordhinayaan duqaynada,waxaana ay sheegeen in ay eegayaan qaabka ay u duqayn karaan deegaanada u dhexeeya Zawiya iyo Triboli,iyadoona la sheegay deegaanadaasi in ay rayidka ku badan yihiin.